Amin'ny teny arabo Silamo Zaza Anaran - Tovovavy Anaran - Manomboka amin'ny Pejy iray amby roa-polo na telo - Zaza Anarana Mivantana
Amin’ny teny arabo Silamo Zaza Anaran — Tovovavy Anaran — Manomboka amin’ny Pejy iray amby roa-polo na telo — Zaza Anarana Mivantana
Ny tanjon ity lisitra ity dia ny hanampy ny teny arabo ireo ray aman-dreny amin’ny fisafidianana ny anarana ho an’ny zazakely vao teraka. Asa manan-danja indrindra dia ny manome anarana ny zaza, izay mety ho ny ray aman-dreny matetika atao. Ny Anarany dia ho eo amin’ny Zaza ny alalan ‘ny fitsaharan’ ny Fiainana.
ny Anarana dia tsy hoe fotsiny noho ny fitsingerenan’ny andro nahaterahany — tena ho amin’ny fiainana. Ny olona sasany milaza fa ny Anarana manana fiantraikany lehibe momba ny zaza ny fampandrosoana sy ny toetrany. Maro ny olona mino izay miteny ratsy dia miteraka hery ratsy sy miteny tsara miteraka hery tsara manodidina azy ireo. Amin’ny alalan’ny fandraisana ny Anaran ‘ny Ankizy nandritra ny taona maro izay dia hanana ny toetra araka ny Hevitry ny Anarany, na dia ny Reniny na ny Ray ny Vaovao Mahafatifaty Zaza, efa nanangona ny lisitry ny arabo Maoderina Zaza Anarana miaraka amin’ ny Dikany. Ireo Anarana ireo dia Ankehitriny koa tsy manam-Paharoa.
Lehibe indrindra fanangonana ny Silamo zaza anarana amin’ny dikany
Raha bevohoka ianao na miandry zaza dia afaka maka ny anarana, ny Farany indrindra sy Malaza, tsy dia fahita Firy ny Ankizilahy sy ny Ankizivavy Anarana. Ny finoana silamo dia izao tontolo izao lehibe indrindra faharoa ny fivavahana, Pakistan, Bangladesh, Indonezia, Afganistana, Arabia Saodita, Iran no be mponina Silamo.
Ireo zaza anarana lisitra dia nikarakara alphabetically
Ny sasany amin’ireo anarana ireo intsony ary afaka hamorona anaram-bositra avy izany mba hitandrina izany fohy. Nick anarana dia afaka ny ho ampiasaina mba hanafohezany ny anarana ofisialy. Izany panangonana ny anarana sy ny dika efa nanangona avy amin’ny loharanom-baovao samihafa, maro ireo no napetraky ny mpitsidika noho izany dia tsy azo raisina ho tompon’andraikitra ny maha-azo itokiana
Ny fomba hitsena ny ankizivavy →